ipayipi lokugezela le-nickel lokugeza ibambo eli-2
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile / WOWOW Indlu yangasese Sink Faucet Brush Nickel Isakazekile
Wowow Bathroom Sink Faucet Briped Nickel Spread
Ama-Amazon US I-Amazon CA I-Amazon MX I-PDF Yomyalelo Wokufaka
UKWANDISWA KWESIKHATHI SOKUDLULISWA KWE-WIDESPLEI-3 Hole Mount Enomklamo Obanzi We-6-16-intshi, ibanga liyalungiswa kuzidingo zakho zangempela.
IPREMIUM QUALITY CLASSIC DESIGN VANITY FAUCET: Isixhumi sethusi esiqinile, esindayo futhi esiqinile. Ukufakwa uphawu okuphezulu kwegobolondo le-ceramic, kunokusebenza okungaconsiki. Futhi i-aerator eyonga amanzi ye-NEOPERL ifakwe.
INDAWO YOKUXHUMANA YOKUXHUMANA YOKUDALAUkwakhiwa kokuxhuma okusheshayo kokudala kulula ukukufaka ngokwakho ngaphandle kweplamba. Gcina imali yokufaka amapayipi ngompompi wowow.
UKUFAKWA KWEZIMBILI: Isibambo esiphindwe kabili sokugeleza okungenamsebenzi nokulawulwa kokushisa kwamanzi. Woza ne-pop-up drain aeembly. Ukumbozwa okushaywe ngompompi wokugeza wokugezela kungukugqwala, ukugqwala, futhi kuyavuza futhi ngeke kuqoqe izigxivizo zeminwe.
INSIZAKALO YEKHASIMENDE: Kunikelwa iwaranti elinganiselwe yeminyaka emihlanu nokuxhaswa kwamakhasimende. Imbozwe ukubuya kwezinsuku ezingama-5. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Bathroom Faucet Spread Brunch Nickel 2321300 imininingwane
I-pop up drain elula kakhulu ukusetha nokusebenzisa kunokusakaza okuvamile.
Ubuchwepheshe be-creative fast connect –isakhiwo sokuqala esinezixhumanisi esisheshayo kulula ukusifaka wedwa ngaphandle komplamba! Gcina amapayipi wokufaka imali ngompompi wezinkuni!
Ubakaki onemigodi emi-3 ngesakhiwo esidlangile esingu-4-16-intshi —- ukufakwa okulula.
Isikhiphi se-Spout faucet nickel end: isiphetho sesibambo esi-2 esakhiwe isitayela se-nickel. Ukulahleka kweminwe, ukumelana nokugqwala. Ideski ebekwe ifenisha eyize yemukelwa indawo yokuhlala, ikhondinium entsha, ifulethi elilodwa, ikhaya lezimoto, i-trailer yokuhamba, nokusetshenziswa kwasendlini.
Ikhwalithi ephezulu ye-faucet nesiqinisekiso seminyaka emi-3: i-aberator yokulondoloza amanzi eyi-50% kanye ne-anti-splatter, ekhishwa iqonde ngqo nezintende zezandla zakho ukugeza (azikho amathuluzi afunwayo). I-cartridge ye-ceramic ye-Drip ayiphumeleli.
I-SKU: 2321300 Categories: Amanzi okugeza, Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile Tags: umcengezi wokuxubha, imbobo emithathu yokulahla, Kugcwele
12.1 x 8.6 x amasentimitha angu-3.1
Imbobo engu-3; ompompi osakazekile
Umpompi osakazekile: 8-16 intshi
Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esisakazekile * 1, Ukufakwa sebhithi * 1, Pop up abakhwabanisi * 1
I-WOWOW 8 Inch Ebanzi Yendawo yokugezela ifekiseli Ehlanganisiwe